Mon, Oct 21, 2019 at 1:07pm
उपनिर्वाचनका लागि मुख्य निर्वाचन अधिकृत खटाइयो #आहा खबर# नागढुङ्गा–सिस्नेखोला सुरुङ मार्ग निर्माणले विकासमा नयाँ आयाम : राष्ट्रपति #आहा खबर# चितवन मेडिकल कजेल तोडफोड गर्नेविरुद्ध प्रहरीमा जाहेरी, १ महिलासहित ११ जना पक्राउ #आहा खबर# म्यान्मा भ्रमणबाट २ देशको सम्बन्ध अझ प्रगाढ : राष्ट्रपति #आहा खबर# सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य सेवालाई सुदृढ बनाउन थप सहयोग गर्छाैं : कार्यकारी निर्देशक कनेम #आहा खबर# नेपाल विदेशीको दबाब र प्रभावमा छैन : परराष्ट्रमन्त्री #आहा खबर# प्रधानमन्त्री ओलीले गरे नागढुंगा-सिस्नेखोला सुरूङमार्गको शिलान्यास #आहा खबर# 'तिहारै आयो लौ झिलिमिली', ६० करोडको चम्किला बत्ती आयात गरिँदै #आहा खबर# दुबईका सबै ट्याक्सीमा सिसि क्यामेरा जडान #आहा खबर# यी महिनामा जन्मेका मान्छे हुन्छन् भाग्यमानी र धनी #आहा खबर# आधुनिक कृषि फार्ममा ढकमक्क सयपत्री #आहा खबर# माछापुच्छ्रेमा ‘एक परिवार एक करेसाबारी’ अभियान, पर्यटकको आगमन बढ्दै #आहा खबर# चर्को आवाजमा मोटरसाईकल हुइँक्याउनेलाई जरिवाना कति ? #आहा खबर# नक्कली नोट छाप्ने उपकरणसहित ३ जना पक्राउ #आहा खबर# युवा वैज्ञानिकलाई स्वदेश फर्कन आग्रह गर्दै उपराष्ट्रपतिले भने - अब मातृभूमिमै रहेर अनुसन्धान गर्नु #आहा खबर#
सोमबार, २३ बैशाख २०७६,	– धु्रबसागर शर्मा .
गलेश्वर, २३ वैशाख ।
उत्तरी म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–४, नारच्याङमा रहेको कुमारी झरनाको रुपमा परिचित नारच्याङ झरना आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको रोजाइमा पर्दै जान थालेको छ ।
पहाडको टुप्पोबाट कलकल गर्दै झर्ने निकै सुन्दर, आकर्षक र मनमोहक झरना पछिल्लो समय आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको रोजाइमा पर्ने गरेको छ ।
बेनी–जोमसोम मोटरबाटो ९कालीगण्डकी करिडोर० अन्तर्गत कालीगण्डकी नदीको पारीपट्टी नारच्याङ खण्डमा पर्ने यो झरना अत्यन्तै आकर्षक र कुमारी झरनाको रुपमा परिचित छ ।
समुन्द्री सतहबाट एक हजार ४०० मिटरदेखि एक हजार ७०० मिटरको उचाइमा नारच्याङ झरना रहेको छ । झरनाको मात्रै उचाइ ३०० मिटरभन्दा बढी छ । मानिसको बासस्थान भन्दा पनि पहिलेदेखि त्यस ठाउँमा झरना रहेको नारच्याङवासीले अनुमान गरेका छन् ।
झरना र मन्दिर जानका लागि त्यहाँसम्म पुग्न विगतमा क्लबको पहलमा गोरेटो बाटो बनाइएको अन्नपूर्ण युवा क्लब नारच्याङका अध्यक्ष श्याम पूर्जाले बताउनुभयो ।
पछिल्लो समय झरनालाई पृष्ठभूमीमा पारेर सेल्फी खिच्नकै लागि भए पनि पर्यटकहरु नारच्याङ झरनामा जाने गरेका छन् । झरनामा पुगेर आसपासका ठाउँमा साइटसिनको निकै मज्जा लिन सकिन्छ । म्याग्दी सदरमुकाम बेनीबजारबाट ३ घण्टाको यात्रामा सवारीसाधनमार्फत नारच्याङ झरनामा पुग्न सकिन्छ ।
वनभोजका लागि पनि मानिस नारच्याङ झरनामा जाने गरेका छन् । विगत केही समययता नारच्याङ झरनाको अवलोकनका साथै घुम्न र रमाउन जाने पर्यटक बढ्दै जान थालेका छन् ।
नारच्याङ झरनाले गाउँको सुन्दरता बढाउनुका साथै गर्मीयामको समयमा शीतलता समेत प्रदान गर्ने गरेको अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना ९एक्याप० नारच्याङका अध्यक्ष तेजबहादुर गुरुङले बताए । उनका अनुसार झरनाको पानीबाट गाउँमा खानेपानीको आपूर्ति, सिँचाइ गरिनुका साथै खोलामा माछा मार्ने गरिएको छ । साइटसिनको आकर्षण बोकेको सुन्दर नारच्याङ झरना बहुउपयोगी रहेकाले पछिल्लो समय फोटोसेसन गर्नेहरु ह्वात्तै बढेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
नारच्याङ झरनाले गाउँमा थप रौनकता थपेको हुँदा नारच्याङ गाउँमा नेपाली पर्यटकको आगमनमा वृद्धि हुँदै गएको अध्यक्ष गुरुङको भनाइ छ ।
झरनामा पुगेर प्रकृतिसँगै रमाउन पाउँदा आफूलाई निकै आनन्दको अनुभूति भएको म्याग्दीका पत्रकार प्रताप वानियाँले बताउनुभयो । म्याग्दी जिल्लामा रहेका थुप्रै पर्यटकीय स्थलहरुको विकास र प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । यता पछिल्लो समय पर्यटकीयस्थलका रुपमा चिनिएको नारच्याङ झरनाको विकास र प्रवद्र्धन गर्नका लागि योजना बनाएर अगाडि बढिने नारच्याङका वडाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद फगामीले जानकारी दिए । झरनासम्म पुग्न पक्की पदमार्ग निर्माण गरिने, रेलिङ हालिने र व्यवस्थित सिँढीहरु बनाइने उहाँले बताउनुभयो ।
घोडेपानीलाई हिमाली देवताको आर्शिवाद
शिरमा रहेको पुनहिलबाट हात अघि बढाए छोइएला झै लाग्ने धौलागिरि, निलगिरि, अन्नपूर्ण, गुर्जा टुकुचे, माछापुच्छ«े लगायतका हिमाल । तिनै हिमाललाई हेर्नका लागि आउने विश्वभरका लाखौं पर्यटकलाई सेवा र सहयोग गर्न आवश्यक सुविधाको चाँजोपाँजो मिलाउन सधैँ व्यस्त हुने गर्छन विश्वविख्यात घोडेपानीका होटल व्यवसायी ।
घोडेपानीका होटल व्यावसायीहरु मगर जातीका छन् । उनीहरु सधैं पर्यटकको खानपान, खाजानास्ता र वासका लागि व्यस्त हुन्छन् ।
हिमाल र गुराँसकै कारण घोडेपानी विश्वभरी चिनिएको छ । हिमाल घोडेपानी र पुनहिलको समृद्धि र विकासको सोपान भएको घोडेपानीका होटल व्यवसायी जुनबहादुर पुनले बताउनुभयो ।
‘हिमाल हाम्रो प्राण हो, हिमालकै कारण हाम्रो जीवन चलेको छ, त्यसैले हामीले बिहान उठ्ने वित्तिकै हिमाली देवताको आर्शिवाद लिएर आफ्नो कामधन्दामा लाग्ने गर्छौ’ होटल स्नो भ्यूका सञ्चालक समेत रहनुभएका पुनले भन्नुभयो ।
उत्तरी म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–६ मा पर्छन् अन्नपूर्ण र पुनहिल । पुनहिल सरकारले घोषणा गरेको एक सय गन्तव्यस्थलमा समेत पर्छ । भ्रमण वर्षको अवसर पारेर सरकारले एकसय गन्तव्यस्थलको घोषणा गरेसँगै घोडेपानी र पुनहिलमा आउने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको सङ्ख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएको घोडेपानीका होटल व्यवसायीले बताएका छन् ।
स्थानीय होटल तथा पर्यटन व्यवसायी टेकसर बुद्धुजा पुन भन्नुहुन्छ,“यहाँ व्यवसायी भावना कम, सहयोग र सेवाको भावना बढी छ, त्यसैले यहाँका व्यवसायीप्रति पर्यटकको पूरा पूरा विश्वास छ, हामीले कमाएको सम्पत्ति पनि त्यही नै हो ।”
यहाँका व्यवसायीले पैसा मात्रै कमाएका छैनन् विदेशीको विश्वास पनि कमाएका छन् । आत्मियता र हार्दिकता प्राप्त गरेका छन् र यी सबै चिजलाई उनीहरुले सोही ठाउँको पूर्वाधार निर्माणमा खर्चिएका स्थानीय होटल व्यवसायी एवं अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका अध्यक्ष क्या डमबहादुर पुनले बताउनुभयो । पुन भन्नुहुन्छ, “यहाँ जति पनि पूर्वाधार निर्माण भएका छन् त्यसमा सरकारको लगानी थोरै र स्थानीयवासीको श्रम बढी छ । पर्यटकबाट प्राप्त आर्थिक सहयोग र जनश्रमदानबाट पदमार्गदेखि लिएर अन्य सबै पूर्वाधार निर्माण भएका छन् ।